उपत्यकाका तीन सिडिओहरुको बैठक बस्दै, निषेधाज्ञा हटाउने विषयमा के भन्छन् ? – Halkhabar kura
३१ असार २०७८, बिहीबार १२:३०
उपत्यकाका तीन सिडिओहरुको बैठक बस्दै, निषेधाज्ञा हटाउने विषयमा के भन्छन् ?
काठमाडौं – काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बस्दैछ। निषेधाज्ञाबारे छलफल गर्न उक्त बैठक बस्न लागिएको हो।
बैठक अपराह्न चार बजे बस्ने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा लामो दुरीका सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ। स्रोतका अनुसार आजको बैठकमा लामो दुरीका सवारी साधनबारे पनि छलफल हुनेछ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीलाई जोर बिजोर प्रणालीमा चलाउन दिने कि भन्ने विषयमा छलफल हुने जानकारी दिएका छन्। स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर लामो दुरीका सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीका आधारमा चलाउन दिनेबारे प्रजिअहरुबीच छलफल भइरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधनमा यसअघि लगाइएको जोरबिजोर प्रणालीको नियम हटाइसकिएको छ भने बाहिरबाट आउने लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातलाई पासको व्यवस्था गरी उपत्यका भित्रिन दिइएको छ।
Previous हेर्नुहोस असार ३१ गते बिहिबार जुलाई १५ तारीखको राशिफल, जय श्रीबगलामुखी माता !
Next साउनदेखि यस्ता मोबाइलहरु बन्द हुँदै, आइएमइआई दर्ता अनिवार्य